तपाई वियर पिउनु हुन्छ ? हेर्नुहोस फाईदा, बियर नराम्रो की तपाईंको सोच | Rajmarga
नेपाली संस्कृतिमा वियर पिउनुलाई राम्रो मानिदैन । बियरलाई मादक पदार्थका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । बियर पिउनु वा नपिउनु तपाईंको इच्छामा निर्भर हुन्छ । तर, पछील्लो समय वियरको प्रयोग निकै हुने गरेको छ । वियर पिउनु हुन्न भने तपाइलाई वियर खाँदा यति धरै फाइदा छन् भन्दा अनौठो लाग्ला । अमेरिकामा हालै गरिएको एक अध्यनले वियर पिउने मानिसलाई मृगौलाको पत्थरी हुने खतरा , नखानेको तुलनामा निक्कै कम हुन्छ भन्ने पत्ता लगाएको छ । थोरै मात्रामा वियर पिउनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । अल्कोहलको मात्रा बढी हुँदा स्वास्थ्यमा खरावी हुने कुरा सबैलाई थाहा छ । तर ठिक्क मात्रामा वियर पिउँदा भने स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने नयाँ अध्यनले देखाएको छ ।
वियर नियमित पिउँदा शरीरमा पानीको कमी हुने खतरा हुँदैन । अमेरिकाको खाद्य विभागले समेत वियरलाई पानीको विकल्पकोरुपमा स्वीकार गरेको छ । दिनमा एउटा वियर पिउँदा पानीको मात्रा ह्वात्तै बढ्छ । युनिभर्सिटी अफ लण्डन कलेजमा गत वर्ष गरिएको एक अध्यनले वियर खाँदा मोटो पन बढ्ने भन्ने मान्यता गलत भएको देखाएको छ । वियरले शरीरमा पाचन शक्ति भने बढाइदिन्छ । जसले भोक बढ्ने समस्या भने हुने शोधकर्ताहरुको भनाइ छ ।
यस बाहेक बियर पिउदाका फाईदा अरु के के छ्न त यहाँ प्रस्तुत
५. मधुमेहका बिरामीलाई बियर निकै हितकर मानिन्छ । दिनमा एक गिलास बियर खानाले टाइप २ नामको मधुमेह हुने खतरा २५ प्रतिशतले कम हुने गर्दछ
Previous post: वैदेशिक रोजगारीको पीडाः मलेशियामै रोकियो परियारको शव
Next post: तपाईलाई थाहा छ यी सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी अनौठा कानुन ?